अटो मेलामा १५ लाखदेखि ४ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी, कुन गाडीको मूल्य कति ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
अटो मेलामा १५ लाखदेखि ४ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी, कुन गाडीको मूल्य कति ?
भदौ २६, २०७५ मंगलबार २०:३८:१७ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाडौं – मंगलबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नाडा अटो शो सुरु भएको छ । वर्षैपिच्छे गाडी बदल्नेदेखि पैदल हिँड्नेहरुको रुचीमा परेको यो मेलाको उद्घाटन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले गर्नुभयो ।
मेलामा १९ ब्राण्डका चारपांग्रे गाडी, २० ब्राण्डका २ पांग्रे मोटरसाइकल तथा स्कूटर, पाटपूर्जा तथा लुव्रिकेन्ट्स कम्पनीका गरी १ सय ३४ स्टल राखिएका छन् ।
नेपाली बजारमा जीप कम्पनीले पनि गाडी बिक्री सुरु गरेको छ । अटो मेलामा जीपको कम्पास मोडलको गाडीको मूल्य ७४ लाख ९० हजार तोकिएको छ । यसको अधिकतम मूल्यका गाडी ९६ लाख ५० हजारमा बिक्री हुने जीपको नेपाली बिक्रेताले जनाएका छन् ।
मेलामा टाटाको सबैभन्दा महंगो कारको रुपमा रहेको हेक्जाको मूल्य ९१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । टाटाको सबैभन्दा सस्तो कार टियागो हो, यसको न्यूनतम मूल्य २४ लाख ९५ हजार तोकिएको छ ।
मेलाकै सबैभन्दा सस्तो कार ड्याट्सन कम्पनीको रेडी गो रहेको छ । ड्याट्सन रेडी गो को न्यूनतम मूल्य १५ लाख २५ हजार र अधिकतम मूल्य २० लाख ५९ हजार रहेको छ । नेपालमा ड्याट्सनको सबैभन्दा महँगो कार गो प्लसको मूल्य २७ लाख ४९ हजार रहेको छ ।
महिन्द्राको सबैभन्दा सस्तो गाडी बोलेरो सिंगल क्याबको मूल्य १६ लाख ६५ हजार रहेको छ । महिन्द्राको नेपालमा बिक्री हुने सबैभन्दा महंगो गाडी एक्सयूभी ५०० को मूल्य ९० लाख ९५ हजार रहेको छ । अरु भन्दा भिन्न स्वरुपको गाडीमा रहेको दावी गर्ने महिन्द्राले थार मोडलको मूल्य ४३ लाख राखेको छ ।